बले र प्रिज्माको भयो ‘ब्रे’कअप’ ! दुवै अलग अलग बाटोमा यसबारे प्रिज्माले दिईन यस्तो प्र’ष्टीकर’ण हेर्नुहोस्। – Samriddhakhabar
November 26, 2021 November 26, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on बले र प्रिज्माको भयो ‘ब्रे’कअप’ ! दुवै अलग अलग बाटोमा यसबारे प्रिज्माले दिईन यस्तो प्र’ष्टीकर’ण हेर्नुहोस्।
पछिल्लो समय सागर लम्साल बले र प्रिज्मा खतिवडा फेरी एका एक चर्चामा आएकाछन । टीकटकबाट उदाएकी प्रिज्मा र भद्रगोल टिभी सिरियलबाट आएका बले केही वर्षदेखि प्रेममा रहेको चर्चा चुलिएको थियो ।उनीहरुले धेरै म्युजिक भिडिओ पनि सँगै गरेका थिए । फागुनमा बिहे गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको थियो । प्रेममा रहेको चर्चा चलेपनि यी दुईले आफूहरु प्रेममा रहेको खबरलाई स्वीकार गरेका भने थियनन । यतिबेला भने यी दुई अ’लग भएको खबरले फेरी चर्चा पाएको छ ।
प्रायः सामाजिक संजालमा सँगै देखिने उनीहरु पछिल्लो समय भने एकअर्कासँगको भिडिओ पोस्ट गरेका छैनन् । उनीहरु म्युजिक भिडिओमा पनि सँगै देखिन छाडेका छन् ।उनीहरु अहिले अ’लग भएको जनाइएको छ । स्रोतले बिहेको कुरा नमिल्दा सम्बन्धमा दरार आएको दावी गरेको छ । तर, यी दुईजना अहिले पनि आफूहरुको सम्बन्धलाई स्वीका’र्न तयार छैनन् ।
ब्रे’कअपको ह’ल्लाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रिज्माले भनिन्, ‘ब्रे’कअप हुन त पहिले रिलेसनमा बसेको हुनुपर्‍यो नि ।उहाँसँग को-आर्टिस्टको सम्बन्ध मात्र हो । उहाँ (बले)लाई सँधै सर भनेर बोलाएकी छु । नभएको सम्बन्ध कसरी ब्रे’कअप भयो ? म्युजिक भिडिओ आयो भनेर भविष्यमा नगर्ने कुरै छैन ।यो पनि पढ्नुहोस्, बलिउड अभिनेता विक्की कौशल र अभिनेत्री कट्रिना कैफको बिहेको मिति नजिकिदै गर्दा फ्यानहरुमा उत्साह बढ्दै गएको छ । फ्यानहरु उनीहरु दुबैलाई वेहुला बेहुलीको रुपमा हेर्न चाहन्छन् ।
तर कट्रिना कैफ र विक्की कौशलले आफ्नो विवाहलाई अहिलेसम्म अफिसियल भने गरेका छैनन् । कट्रिना कैफ र विक्की कौशल डिसेम्बरको पहिलो साता राजस्थानमा विवाह गर्दैछन् भन्ने खबरहरु आइरहेका छन् । दुबैको बिहेको खबर सामाजिक सञ्जालमा फिल्टर गरेर बाहिर आइरहेको छ, जसलाई दुबैको टिमले लुकाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म रोका समारोहदेखि विवाहको तयारीसम्मको जानकारी आएको छ । योसँगै अहिले कट्रिना कैफ र विक्की कौशलले विवाहमा आफ्नो गोपनीयता कायम राख्न ठूलो कदम चालेको दाबी गरिएको छ । उनीहरुले पाहुनाको फोनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
रिपोर्टका अनुसार उनीहरुको बिहेको दिन कट्रिना कैफ र विक्की कौशलका लागि धेरै स्पेशल हो र त्यसैले दुबै आफ्नो दिन निकै गोप्य होस् भन्ने चाहन्छन् । यो जोडी आफ्नो विवाहको भिडियो र तस्विर सामाजिक सञ्जालमा लिक नहोस् भन्ने चाहन्छ । विशेष कुरा के छ भने आफ्नो गोपनियता कायम राख्नका लागि जोडीले एउटा टोली पनि हायर गरेका छन्, जसले सबै कुराको हेरचाह गर्नेछ ।
नारायणगढमा बस दु’र्घ’ट’ना
November 10, 2021 खबर समृद्ध
दुई छोरी दु’र्घ’ट’नामा परेको खबर पाएलगत्तै बुवाआम काठमाडौंबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुगे तर…
भारतविरुद्ध गोर्खाली पारामा खेल्छौँ : कप्तान किरण
October 16, 2021 October 16, 2021 खबर समृद्ध